Zvakanakira nekuipira kwekushambadzira kwenhare muCommerce | ECommerce nhau
Zvakanakira nekuipira kwekushambadzira kwenhare muCommerce
Kushambadzira nharembozha ndeye mushandirapamwe une chinangwa chikuru chekuvhura zviito kana kushambadzira zvemukati zvirongwa uye izvo zvinobvumidza vashandisi kupinda mukubatana kukuru nevateereri. Chimwe chezvinhu chinoratidzira uyu mushambadziro muenzaniso ndewekuti anonyanya kufambidzana mafomati anogadzirwa kuburikidza kuburikidza nechero zvigadzirwa (malaptop, nharembozha, mapiritsi kana zvimwe zvigadzirwa zvehunyanzvi).
Kushanda kwaro kunonakidza kwazvo kumakambani ari muchikamu chedhijitari kuti vataure nevatengi vavo, vanotengesa kana vamwe vamiririri vezvemagariro. Kusvika pakuti inogona kuve chishandiso chine simba che kukwezva nhamba huru yevatengi kana kungo tengesa zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu. Kubva pane ino maonero, inguva yakafanira yekutarisa zvakanakira nekuipira kushambadza nhare muCommerce kana zvemagetsi zvekutengeserana. Nekuti zvinoenderana nezvinhu zvakawanda, sezvatinoona gare gare.
Zvakanakira kushambadzira nharembozha muCommerce zvinogona kushanda zvakanyanya kana zvikaendeswa kuburikidza neyakajeka-inotsanangurwa nzira yekutengesa. Iko kudiwa kwevashandisi kunotorwa mukati, asiwo zvemagariro enhau uko mameseji anozoonekwa. Pazvinenge zvichidikanwa kuti utarise, zvinoenderana nezvidzidzo zvakasiyana pakushambadzira kwedigital, izvo zvizhinji zve vatengi vanowana webhusaiti kubva pamidziyo yakawanda uye vanoshandisa akawanda masikirini akateedzana.
1 Nhare dzekushambadzira makirasi
2 Kubatsira kwekushambadzira kwenhare muCommerce
3 Mimwe mipiro yekushambadzira kwenhare
4 Kukanganisa kwekushambadzira kwenhare muCommerce
Nhare dzekushambadzira makirasi
Usati wajekesa zvayakanakira nezvayakaipira, zvichave zvakafanira kuti iwe uzive mhando dzekushambadzira nharembozha dzauinadzo kusimudzira chiitiko chako chehunyanzvi kuburikidza neInternet.
kuratidza: aya ndiwo mafomati aunogona kusanganisira pane webhusaiti pane yako nhare kana zvimwe zvekushandisa matekinoroji. Uine huwandu hwakawanda hwezvikumbiro zvaunazvo panguva ino, uye pakati pazvo zvinotevera kumira:
Pasina kukanganwa kuti mumakore achangopfuura mamwe mafomati ekutsvagisa nharembozha ave kubuda kubva kumafoni uye izvo zvinoda kuwedzera kwehunyanzvi kukura.
Kutumira mameseji: SMS uye MMS. Ehezve, iri mhando yekushambadzira iyo yava yechinyakare, asi izvo zvinozadzisa chinangwa mune izvo zvinonzi mameseji enhare.
MAKARALI USB: Haisi yakanyanyisa tekinoroji yekushambadzira modhi, asi zvirinani inoshanda kuburikidza neyekushambadzira server yeaya maitiro.
Kutengesa: isu takatarisana neyakaomesesa system yekutangisa kushambadza mameseji anotsigirwa nemavhidhiyo mitambo uye nekudaro haizokanganisa bhizinesi rako paInternet.
Kubatsira kwekushambadzira kwenhare muCommerce
Haasi ese matema uye machena mune iyi mhando yekushambadzira. Asi chekutanga pane zvese isu tichaongorora mabhenefiti ayo izvi zvingave nazvo kuchitoro chako kana bhizimusi chairo. Iwe uchaona kuti ivo vari kupfuura zvawaifunga kubva pakutanga nzira. Saka kuti kubva ikozvino uchienda mukana wekushandisa mukana uyu mukuvandudza bhizinesi rako redhijitari. Kuziva nguva dzese kuti uchafanirwa kusiyanisa chinonzi kushambadzira nhare kubva pane izvo zvisiri. Nekuti ichave imwe yekiyi yekuvandudza zvine hungwaru uye zvine mwero basa zano
Kukurumidza: iyi nzira yekushambadzira inokupa iwe mukana wekupinda mukati mevateereri. Izvi zvinodaro nekuti zviteshi zvehunyanzvi zvine hunhu izvi zvinokupa iwe mukana wekuti usvike pakarepo kune vamwe vanhu kana makambani. Zvakawanda kupfuura kuburikidza neyakajairika kana echinyakare makwara.
Kushamwaridzana kwevanhu: Izvo hazvigoneke kuti kuburikidza nesystem ino unokwanisa kubatana nechimwe chikamu cheichi chiitiko. Ndokunge, nevatengi vako vanogona zvakare kutumira kune avo vavanosangana navo kana kugovana navo pasocial network. Kana kushambadzira kusanganiswa nehukama hwemagariro, mhedzisiro yacho inogona kudzokororwa nekumwe kusununguka kana iwe ukaita zano rekuzadzisa chinangwa chakambotsanangurwa.
Dzoka pakuisa mari: Haufanire kungoongorora chikamu chebhizimusi cheiyi kushambadzira system. Asi zvakare iyo yezvehupfumi uye neiyi pfungwa, iyo mutengo pamubhadharo unogona kuve unobatsira zvakanyanya kupfuura kuburikidza nekumwe kushambadzira kushambadzira midhiya. Saka kuti nenzira iyi, ese maronda ekutengesa nevashambadzi ivo pachavo vanobatsirwa. Uye sezvo iwe pachako semuridzi wedigital domain.
Mimwe mipiro yekushambadzira kwenhare
Chero zvazvingaitika, kune zvimwe zvakanaka zvekushandisa mhando iyi yekushambadzira uye yausingafanire kukanganwa kana uchitarisana nemushandirapamwe wako wekushambadzira. Iko imwe yeakanyanya kukosha ndeye iyo yakatorwa kubva pakuti iwe unokwanisa kuchinjika kune yakakura nhamba yezviitiko. Kuburikidza ne kushambadza uko kwakamira zvishoma uye kunogona kutonyanya kuve kunokwezva kune vatengi vako kana vashandisi. Hazvishamisi kuti, iri chiitiko chave chiri kuwedzera mumakore achangopfuura kuchinjika kune ese matekinoroji zvigadzirwa. Zvinoenderana nezvidzidzo zvakati wandei zvekushambadzira, ivo vanonongedza kuti iyi itsika yekumusoro pane akasiyana maficha evashandisi kutenderera pasirese.
Imwe yemipiro yake yakakosha yakabatana zvakananga nekutenga ivo pachavo. Iko, kutenga pamhepo mumwedzi gumi nembiri yekupedzisira dzakura zvinopfuura makumi mana muzana kuburikidza nemidziyo iyi uye iyi ndiyo tsika inoramba ichikura mukota yekupedzisira ya2018. Kusvika pakuratidza kuti e-mabhizinesi anoda kuramba achikwikwidza anofanirwa kuchinjisa mutsetse webhizimusi ravo kuti rishandiswe nhare.
Imwe pfungwa yakanaka yekusarudzira iyi yekushambadzira modhi inogara iri inyaya yekuti inyanzvi inotamba ichitsigira vemabhizimusi vadiki nepakati mune iri chikamu nekuti vanogona kusvika kune vavanogamuchira panguva chaiyo pavanenge vachizotora sarudzo. .. Naizvozvo, iko kushambadza kunoenderana nenguva uye padyo nemushandisi kunogona kukanganisa kuwedzera kweiyo shopping online. Senge mune anotevera ongororo atinofumura pazasi:
Icho chiziviso kunyanya kunetseka kushanyirwa.
Su mashandiro Izvo zvinopfuura zvakaratidzwa kuburikidza nezvakawanda zvidzidzo.
Se zvinowirirana nezvinodiwa uye zvido yezvinyorwa zvitsva zvemushandisi.
Inobvumira zadzisa zvinangwa munguva ipfupi.
Kukanganisa kwekushambadzira kwenhare muCommerce
Kunyangwe pane zvinopesana, rudzi urwu rwekushambadzira runounza dzakateedzana nezvakaipa zvaunofanira kuongorora kubva panguva ino kutsanangura yako yekutengesa nzira mune yedhijitari commerce kana chitoro chauinacho. Kubva pane ino mamiriro akapamhama, kumwe kwekukuvara kwayo kukuru kuri pakuti iwe uchafanirwa kusiyanisa manejimendi mune rako bhizinesi rehunyanzvi. Kusvika pakuti iwe unotofanira gadzira mamwe ma tweaks kune dhizaini kune webhusaiti yepfuma yako.
Asi kuitira kuti uve nemafungiro akajeka ekuti iyi modhi yekushambadzira ingakukuvadza sei, tiri kuenda kunonyora zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvekubheja nhare mukutengesa zvemagetsi.
La makwikwi akakwirira zvakanyanya uye nekudaro iwe uchazoda zvakanyanya kukwikwidza zvemukati kuitira kuti pakupedzisira vateereri vafarire.
La kusavimba nevazhinji vevashandisi vanoda kuona chigadzirwa kana zvinyorwa vasati vatenga online.
La kuramba kana kuoma kutengeswa zvimwe zvigadzirwa kana zvinyorwa kuburikidza nenzira idzi mukushambadzira kwavo.
Kungave kuvhiya kunokwanisa tora zvinodhura kana zvese mari zvikaverengerwa mukutungamira kwayo uye pakati pazvo izvo zvinogadzirwa nekutakura kwayo zvinoonekwa.
Iyo manejimendi modhi matinozo fanirwa bvuma usati wasvika kune yako geolocation.
Inoda rumwe ruzivo rwekushandisa kwayo kwayo. Izvi zvinodaro nekuti dzimwe nguva, kune akawanda maitiro anobatsira eimwe kana imwe sisitimu yekushandisa. Nekuti zvirokwazvo izvo zvinouya kubva kuApple, IOS, Blackberry kana Windows Foni 8 hazvina kufanana.Kutaura zvishoma chete mienzaniso.
ari mari yekugadzirisa Icho chimwe che mabhureki pane kushambadzira nhare. Izvi zvinogona kutsanangurwa nekuda kwechikonzero chakareruka chekuti chero mushandirapamwe unoda chinja nhare. Uye semhedzisiro yechiito ichi, mubhadharo watichafanirwa kutarisana nawo mukutengesa kwedu kwedhijitari.
Mune zvimwe zviitiko, usakanganwa kuti zvinogona kunge zviri izvo izvo deredza kutarisisa kwenguva yemushandisi uye chokwadi ichi chinogona kukanganisa purofiti yakaderera mukirasi ino ye media kuti uwane mari pawebhusaiti yechitoro chepamhepo.
Sezvaungave iwe waona, kune akateedzana emwenje uye mimvuri mukushandisa kweyekushambadzira nhare muCommerce. Iwe uchafanirwa kuisa zvese zvinhu pachiyero chimwe uye wosvika pamhedziso kana zvichizokodzera kusarudza iyi sarudzo pawebhusaiti yako. Kwete mune zvese zviitiko pachave nemhinduro imwechete uye zvese zvinoenderana nerudzi rwebhizinesi rako, zvinangwa zvako uye nemazano ekukurudzira kubva zvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kushambadzira kwenhare » Zvakanakira nekuipira kwekushambadzira kwenhare muCommerce
Matipi ekugadzira peji rakamhara rekumhara kune yako eCommerce